Fandidiana vita amin'ny fantsom-bolan'ny New Australia Harbour - Blog Ellicott Dredges
Jona 3, 1999
Ny mpandraharaha mpitrandraka drakaka aostralianina, Hall Contracting Pty Ltd dia vao tsy ela akory izay no nahavita dredging tany amin'ny Mackay Small Craft Harbour any amin'ny morontsiraka afovoan'i Queensland. Ny seranan-tsambo vaovao, izay ahitàna zaridaina 590 berta mandray sambo mpizahatany izay manompo ny Great Barrier Reef, dia namboarina mifanila amin'ny seranan-tsiranoka misy siramamy sy siramamy ao Mackay.
Ny fanamboarana ny seranan-tsambo vaovao dia misy:
Ny fanamboarana rano marefo 1,300 m matanjaka tsy tapaka, notanterahin'i John Holland Construction.
Ny fanondranana ny 600,000 m3 fasika somary manjelatra mankany amin'ny halalin'ny RL-4.5 m Lozan'ny Astronomika Tide, 150,000 m3 ity fitaovana ity dia nampiasaina mba hamerenana faritra iray eo amin'ny sisiny ho an'ny fampandrosoana ara-barotra ho avy, ny 350,000 m3 dia nivezivezy tamin'ny onjam-panondranana roa 3,500 m to trano vaovao indostrialy.
Famerenana ny fananana indostrialy
Nampiasa azy ireo ny Hall Contracting Ellicott® Marika B890 14 sela mpanapaka (CS) "Kikilu" miaraka amina mpanapaka mavokely ho an'ny 3,500 m manosika ho an'ny Estate Industrial vaovao.
Rantsana rongony mahery vaika 18 / 16 ao anaty paompy mpanamory no hita amina làlana. Ny tobin-tsika booster tsirairay dia nasiana mari-pahaizana momba ny trano fonenana hush kit hiantohana ny fiantraikany kely amin'ny faritra manodidina. Rafitra fanaraha-maso telemetaly, novolavolain'ny Hall Contracting, no nampiasaina mba hifehezana ireo efitrano roa booster tsy lavitra ny tranom-patin'ny dredge.
Ny tsindry anatiny sy ny fivoahana sy ny motera RPM dia arahi-maso sy fehezina avy amin'ny dredge, tena manatsara ny fahombiazan'ny fanodinkodinam-bola, fampiasana solika ary fanombohana ary hanidy ny fomba. Izany dia nahafahan'ireo seha-pitomboana fanaraha-maso haingam-pandeha izay manana tahiry mazava eo amin'ny vidin'ny asa.
Ireo olana momba ny tontolo iainana
Noho izy mifanakaiky amin'ny valan-javaboary Great Barrier Reef Marine, iray amin'ireo zava-mahatalanjona voajanahary eran'izao tontolo izao, dia voafehy fatratra tamin'ny fomba fijery sy tontolo iainana ny tetikasa. Ary koa, mifanila mivantana amin'ny faritra famenoana indostrialy dia heniheny melaleuca teratany iray manohana karazan-javamaniry sy zavamaniry voaaro.
Noho izany dia nanomana drafi-pitantanana feno momba ny tontolo iainana ny Hall Contracting ho fankatoavana ny departemanta. Ity drafitra ity dia nanolotra faritra feno fatotra miaraka amina tamba-jaza mpirehareha mba hifehezana ny kalitaon'ny rano ao.
Ny fandrefesana isan'andro ny haben'ny kalitao tafiditra ao:
* Oxygen malemy
izay notanterahina sy noraketina an-tsoratra tao anaty tatitra tsy tapaka ho an'ny masoivohon'ny departemanta.
Ny Hall Contracting dia nidera an'i Mackay Port Authority ho an'ny famaranana arak'asa mba hamenoana ity faritra ity, izay hamorona ny haben'ny seranan-tsambo sy fizahan-tany momba ny fizahan-tany.
Fanaraha-maso ny fifamoivoizana GPS
Samy namboarina tamin'ny làlan-jotra tred GPS GPS ny trimble roa mifamatotra amin'ny fanaraha-maso mandeha amin'ny lalana. Ireo solosaina mandeha an-tsambo dia mampiasa ity fanaraha-mason-tsolika mivantana amin'ny fotoana manaraka ity miaraka amin'ny GPS mba hametrahana ara-potoana ny fanapahana amin'ny fiaramanidina mijoro sy laharam-pahamehana. Tena fitsikera mafy an'i Mackay io vokatry ny fiakaran'ny rano ao amin'ny seranan-tsambo.
Nandritra ny vanim-potoanan'ny drafitra ny tetikasa, ny faritra haolika dia nizara ho faritra miavaka mifototra amin'ny faritry ny zana-kazo tsirairay. Ireo faritra ireo dia niditra tao anaty solosaina an-tsambo mba hanaraha-maso ny fandrosoana amin'ny fotoana tena izy. Ny dredge tsirairay avy dia notendrena ny faritra iasan'izy ireo isaky ny fiovana. Isaky ny faran'ny fiovana tsirairay dia nohadihadiana ho azy ny angona GPS mba hamaritana ny habeny, ny habe ary ny fahamarinan'ny dredging.
Andriamatoa Brian Hall, talen'ny Hall Contracting, dia nilaza fa, "Ny rindrambaiko GPS namboarina tao anaty dredge izay nampiarahana tamin'ny fandrefesana ny fotoana tena izy dia nahafahanay nahita tsara ny lohan'ny fanapahana tamin'ny fotoana manokana. Ity dia tena manakiana manokana an'ity asa ity raha toa ka 6.5 ​​m ny velarantany. Io koa dia nahafahanay nanara-maso ny zava-bitan'ny mpandraharaha tsirairay raha oharina amin'ny fampitahana. Izany dia nahita anay nahatratra ny haavon'ny famokarana mbola tsy nisy toa azy teo amin'ny metatra toratelo isan'ora ary ampiarahina amin'ny maha-marina ilay dredge izay midika fa tsy misy overjet na dredge indray, ny asa dia tonga ara-potoana sy tetibola.
Amin'ny ankapobeny, ny tetikasa dia fahombiazana tanteraka ho an'ny Hall Contracting ary ny matihanina izay notanterahina dia nahazo fiderana avy amin'ny John Holland Construction sy Mackay Port Authority.
Tetikasa hafa ny Hall Contracting dia tafiditra ao anatin'izany: ny fifanarahana fototra ho an'ny Greg Norman namolavola Golf Golf Pelican Waters any Caloundra any Queensland. * Fandefasana lakandranon'i Pelican Waters. * Ilay tohodrano fanamboarana lakozia any Queensland dia nirotsaka tany Gladstone, Queensland. www.hallcontracting.com.au